I-FTC futhi Ungalandeli
Musa Ukulandela: Lokho Abadayisi Abadinga Ukwazi
NgoLwesithathu, Januwari 26, 2011 NgoMsombuluko, Septemba 28, 2020 Douglas Karr
Sekuvele kunezindaba ezimbalwa mayelana nesicelo se-FTC sezinkampani ze-Intanethi ezinikeza amandla izici ezinikeza amandla abathengi ukuthi bangalandelelwa. Ukube ubungalifundanga ikhasi le-122 Inqubomgomo umbiko, ungacabanga ukuthi i-FTC ibisetha uhlobo oluthile lomugqa esihlabathini esicini abacela ukubizwa ngaso Ungalandeli.
Kunezindlela eziningi izinkampani ezilandelela ukuziphatha kwabathengi online. Okudume kakhulu, yiqiniso, amakhukhi wesiphequluli agcina idatha nolwazi njengoba uxhumana nesayithi. Amanye amakhukhi angama- umuntu wesithathu, okusho ukuthi umthengi angalandelelwa kumasayithi amaningi. Futhi, kunezindlela zokuthwebula idatha ngamafayela e-Flash… lokhu kungenzeka kungaphelelwa yisikhathi futhi akuvami ukususwa lapho usula amakhukhi kusiphequluli sakho.
Ungalandeli isici sokuzikhethela i-FTC engathanda ukuthi isetshenziswe esinika amandla umthengi ukuthi ayeke ukulandelwa. Umqondo owodwa ukukhombisa lapho isikhangiso sifakwa nedatha elandelwayo, enikeza ikhasimende ukuthi liphume ekuthathweni kwedatha nakumkhangiso. Omunye umqondo ovela ku-FTC ukuthi, esikhundleni salokho, unikeze Ngesikhathi idatha engasetshenziswa ngemvume yomthengi ukubeka isikhangiso esifanele.
Yize i-FTC yenze lezi ziphakamiso… kanye nokusikisela okuncane ukuthi uma imboni ingaqhamuki nokuthile, ingahle… ibone nemiphumela yalokho kubuchwepheshe. Iqiniso ngukuthi abathengisi abanesibopho nezinkampani eziku-inthanethi basebenzisa imininingwane yokuziphatha ukukhiqiza umuzwa ongcono, ofanele womsebenzisi. I-FTC ikuvuma lokhu ngokusho:
Noma iyiphi indlela enjalo akufanele idicilele phansi izinzuzo ezinikezwa ukukhangisa kokuziphatha okuku-inthanethi, ngokuxhasa ngemali okuqukethwe kwe-inthanethi nezinsizakalo nokunikeza izikhangiso ezenziwe zaba ngezakho abathengi abaningi abazazisayo
Umbiko Wobumfihlo uyaqhubeka nokusho ukuthi noma yikuphi ukubhaliswa okuphakathi njengakwi- Ungenzi Call uhlu alukholakali futhi ngeke luhlolwe njengesisombululo. Umbiko Wobumfihlo we-FTC, uqobo, uphakamisa imibuzo eminingana emikhulu:
Kufanele kanjani indlela enjalo inikelwe kubathengi futhi kwaziswe?
Imishini enjalo ingaklanywa kanjani ukuthi ibe njenge icacile futhi iyasebenziseka ngangokunokwenzeka kubathengi?
Yiziphi izindleko nezinzuzo ezingaba khona yokunikeza indlela? Isibonelo, bangaki abathengi
kungenzeka ukhethe ukugwema ukuthola ukukhangisa okuhlosiwe?
Bangaki abathengi, ngokuphelele nangamaphesenti, abasebenzise i- amathuluzi wokukhetha ukuphuma okwamanje kunikeziwe?
Yini engaba khona umthelela uma amanani amakhulu abathengi ekhetha ukuphuma?
Kungabathinta kanjani abashicileli abakwi-inthanethi nabakhangisi, futhi kanjani kuthinta abathengi?
Kufanele umqondo we indlela yokukhetha yendawo yonke ukunwetshwa ngaphezu kokukhangisa kokuziphatha okuku-inthanethi futhi kufaka, isibonelo, ukukhangisa kokuziphatha kwezinhlelo zokusebenza zeselula?
Uma umkhakha ozimele ungayisebenzisi ngokuzithandela indlela esebenzayo yokukhetha umfaniswano, kufanele ngabe i-FTC batusa umthetho edinga indlela enjalo?
Ngakho… asikho isizathu sokwethuka ngalesi sikhathi. Ungalandeli akuyona into eqinisekile. Ukuqagela kwami ​​ukuthi ayisoze yamukelwa uquqaba. Esikhundleni salokho, isibikezelo sami ukuthi lo mbiko uzoholela ekusithekeni okuyimfihlo okusobala nokulandelela kumasayithi (attn: Facebook). Lokho akuyona into embi, ngicabanga ukuthi abathengisi abaningi abasemthethweni bayazazisa izitatimende nezilawuli eziqinile nezicacile zobumfihlo.
Ngingathanda ukubona mathupha iziphequluli zisebenzisa ezinye izinsiza zokungena nokuthumela imiyalezo ezinikeza abasebenzisi impendulo ecacile lapho idatha yabo iqoqwa, ngubani oyigcinayo, nokuthi isetshenziswa kanjani ukubonisa ukukhangisa okufanele noma okuqukethwe okunamandla. Uma imboni inganikeza ngamazinga athile, kuzoba intuthuko enkulu kubo bobabili abathengi nabathengisi ngokufanayo. Ngeminye imininingwane, vakashela i- Ungalandeli iwebhusayithi yokubambisana.
I-Aprimo: Ividiyo Yokumaketha Yezobuchwepheshe